Inona no ho hita ao Sanlúcar de Barrameda | Vaovao momba ny dia
Lola curiel | | España, General, tora-pasika, Inona no ho hita
Sanlúcar de Barrameda, eo anoloana ny valan-javaboary Doñana, Io no iray amin'ireo tanàna be mpitsidika indrindra amin'ny morontsirak'i Cádiz. Nibodo hatramin'ny vanim-potoana talohan'ny tantara ary noho ny toerany stratejika, dia nonina ny Tartessos, io no toerana nanorenan'ny tranon'ny Medina Sidonia, iray amin'ireo zava-dehibe indrindra any Espana, ary natsangana ho teboka manan-danja amin'ny fanondranana ny entana mandritra ny fanjanahan'i Amerika. Androany, ny arabe dia mitazona sy manome taratra ireo taonjato maro nisian'ny tantara.
Ny harena ara-kolontsaina, ara-tantara ary voajanahary ao Sanlúcar de Barrameda dia mahatonga azy io ho tanjona tsara hitsidihana vakansy. Ranomasina, tsangambato, fiainana alina ary fisotroana hihinana tsara, manana ny ilaina rehetra ilaina mba tsy ho leo ianao. Raha tsy fantatrao izay ho hitanao sy izay hatao any Sanlúcar de Barrameda, dia tsy azonao atao ny tsy mahita an'ity lahatsoratra ity izay hahitanao azy tanisao miaraka amin'ireo toerana mahaliana ny mpizahatany izay tena ilaina amin'ny fitsidihanao an'io firavaka an'ny Cadix.
1 Tsidiho ny Barrio Alto
1.2 Trano malalaky ny La Merced
1.3 Basilika an'ny vadin'ny fiantrana
1.4 Vavahady Rota
1.5 Our Lady of the O Paroasy
1.6 Lapan'i Medina Sidonia
1.7 Lapan'i Orleans-Bourbon
1.8 Castle an'i Santiago
2 Ny morontsiraka tsara indrindra any Sanlúcar de Barrameda
2.2 Tendrombohitra La Calzada sy Las Piletas
2.3 Morontsiraka Jara
4 Tsenan'i Bonanza
5 Tsidiho ny valan-javaboary Doñana avy any Sanlúcar
6 Flamenco any Sanlúcar
6.1 Aiza no ahitako seho flamenco ao Sanlúcar de Barrameda?
6.1.1 Mbola fiainana averina amin'ny laoniny
6.1.3 Efitra Rociera El Rengue
7 Toeram-pisotro misy divay any Sanlúcar
7.1 Toeram-pisotro misy alikaola sasany izay mandamina fitsidihana ny toerana misy azy ireo
8 Aiza no hisakafoanana any Sanlúcar de Barrameda
8.1 Trano fisakafoanana Casa Bigote
Tsidiho ny Barrio Alto
Ny Barrio Alto de Sanlúcar no faritra tranainy indrindra amin'ny tanàna, tamin'ny Moyen Âge dia nifantoka tamin'ny hetsika rehetra izy io ary narovan'ny rindrina iray. Ny fandehanana mamaky ny arabe dia tena fitsangatsanganana taloha ary fotoana tsara hianarana momba ny maha-zava-dehibe ny tanàna amoron-tsiraka ho teboka stratejika amin'ny varotra.
Trano fivavahana, zaridaina, famokarana divay ary lapa, isaky ny zoro dia manana tantara. Aorian'izay, hasehoko anao ny fijanonana tokony hataonao rehefa mandeha mamaky ny Bairro Alto ianao.
Any amin'ny Cuesta de Belén, akaikin'ny Palacio de Medina Sidonia, i Las Covachas na i Tiendas de Sierpes dia tsenan'ny mpivarotra taloha. Miaraka amin'ny fomba Gothic mariho, izy ireo dia nasaina natsangana tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX avy amin'ny Duke faha-XNUMX an'i Medina Sidonia, Enrique Pérez de Guzmán y Meneses, amin'ny iray amin'ireo arabe izay, tamin'izany fotoana izany, nampivondrona ampahany lehibe tamin'ny hetsika ara-barotra nataon'i Sanlúcar izany. Misarika ny saina ny tranobe noho ny galerin'ny tsangantsanganana midadasika sy frieze tsara tarehy voaravaka dragona an'ny dragona.
Trano malalaky ny La Merced
Naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary dia nampiasaina ho trano fitokanana ary, taty aoriana, dia lasa hermitage. Tahaka ny ankamaroan'ny trano sy tsangambato manan-tantara ao an-tanàna, ny Auditorium an'ny La Merced koa dia Izy io dia natsangana noho ny fiarovana ny tranon'ny Medina Sidonia.
Tamin'ny taona 80, dia simba tanteraka ilay trano fivarotana taloha. Noho izany, nanapa-kevitra ny Duchess XXI an'ny Medina Sidonia ny hanome ilay toerana ho an'ny Sanlúcar City Council sy miasa ankehitriny amin'ny efitrano malalaky ny Kaomina sy foiben'ny Delegation of Culture of the City Council ary ny Fetiben'ny Mozika Iraisampirenena Sanlúcar.
Basilika an'ny vadin'ny fiantrana
Ny Basilica an'ny Our Lady of Charity dia nasaina namboarin'ny Duke VII an'i Medina Sidonia. Ny asa dia naharitra tamin'ny 1609 ka hatramin'ny 1613. Ny fiangonana dia notendren'ny mpitondra fivavahana notendren'ny trano ambony.
Nankinina tamin'i Alonso de Vandelvira, mpanao mari-pahaizana zon'ny Casa de Medina Sidonia, ny komisiona, izay nanome fomba fiasa miharihary tamin'ny fitoerana masina. Ny mason'ny fiangonana dia mahonon-tena ary manasongadina ny tilikambo lakolosy tsara tarehy izay manome satroboninahitra ny ivelany. Ao anatiny dia misy dome saika fisaka mamela ny mazava hamaky ny lavaka iray izay eo an-tampony no manazava ny alitara lehibe.
Ny vavahadin'i Rota io dia iray amin'ireo fidirana mankamin'ny tanàna taloha, voahodidin'i Guzmán el Bueno. Manana ny anarany izy io Amin'izay fotoana izay eo amin'ny rindrina, ny lalana izay mampifandray an'i Sanlúcar de Barrameda amin'i Rota, vohitra mifanila aminy. Ao Sanlúcar dia fantatra amin'ny hoe "The Arquillo" ary ny fananganana azy dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ka hatramin'ny faha-XNUMX.
Our Lady of the O Paroasy
Ny paroakan'ny vadin'ny O Io no Greater Church of Sanlúcar de Barrameda. Ny fananganana azy dia nanomboka tamin'ny 1603 ary natao noho ny fanohanan'ny Duchess First of Medinaceli, Isabel de la Cerda y Guzmán, izay zafikelin'i Guzmán el Bueno ihany koa.
Amin'ny endriny Mudejar sy ny zavamaniry mahitsizoro, ny tempoly dia miavaka amin'ny rindrin'ny vato fasika ao aminy, nampanan-karena ny akanjom-boninahitr'ireo trano mendri-kaja ao Guzmán sy de la Cerda. Anatiny, ny valindrihana mitafo any Mudejar dia misarika ny maso rehetra.
Ny lapan'ny Dukes any Medina Sidonia Naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny riatan'ny silamo tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny fomba maritrano samy hafa dia miara-monina ao an-dapa, manjaka ny fomba Mudejar, ny fanamboarana taloha, ary ny Renaissance. Ny atitany dia feno zavakanto kanto azon'ny trano mendri-kaja. Misongadina ny sary hosodoko nataon'ireo mpanakanto manana ny maha-lehibe an'i Zurbarán sy Francisco de Goya. Ny ala dia manana ala 5000 m2 ary io dia iray amin'ireo firavaka lehibe amin'ny trano.
Androany, ny lapam-panjakana dia foiben'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa Fundación Casa Medina Sidonia ary Izy io dia tranon'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny misolo tena sy tena izy ao Sanlúcar de Barrameda.
Ny lapa dia naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX, toy ny trano fonenan'ny Dukes of Montpensier, Antonio de Orleans ary María Luisa Fernanda de Borbón. Amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo trano malaza indrindra eto an-tanàna, miasa amin'ny maha City Council of Sanlúcar de Barrameda.
Ny endriny maritrano sy ny zaridainany mahafinaritra no mamorona azy asa kanto tokana, ny faoade style neo-Mudejar kosa dia mifanohitra amin'ny klasista italiana hita any amin'ny faritra sasany ao anatiny. Ny bika aman'endrika toa an'i Rococo, ejyptiana na sinoa, dia misy amin'ny efitrano hafa ao an-dapa.
Castle an'i Santiago
Naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX teo ambany fiahian'ny Casa de Medina Sidonia, Ny Castillo De Santiago dia misongadina amin'ny fomban'ny Gothic tara ary ho an'ny fitazonana, dika mitovy amin'ny Torre de Guzmán el Bueno avy ao amin'ny Castle Castle Tarifa. Ilay tranobe dia nanjary fiarovana mimanda ary notsidihin'ny olona manan-danja izay nijanona tao Sanlúcar noho ny toerana misy azy, toa an'i Colón, Fernando de Magallanes ary i Isabel la Católica aza.
Ny Castillo De Santiago dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo toerana tsy maintsy hitanao eto an-tanàna. Amin'izao fotoana izao trano ao anatin'ny Tranombakoky ny fitafiana sy tranom-bakoka fitaovam-piadiana, ny fidirana amin'ny roa dia tafiditra miaraka amin'ny tapakila fidirana ankapobeny mankany amin'ny trano mimanda. Ho fanampin'izay, manana zaridaina sy efitrano maro izy izay atolotra hampiantrano ny karazana fankalazana.
Ny morontsiraka tsara indrindra any Sanlúcar de Barrameda
Sanlúcar dia tanàna manolotra drafitra sy fahafaha-manao betsaka, na dia faritra amorontsiraka aza dia mendrika ny hitsidika na dia amin'ny ririnina aza. Na izany aza, Raha mankany an-tanàna ianao amin'ny fahavaratra ary mitady handositra ny hafanana atsimo dia afaka mankany amin'ny torapasika tsara indrindra any Sanlúcar de Barrameda, mankafy ny masoandro ary milay amin'ny fandroana tsara.
Any am-bavan'ny Guadalquivir, ity moron-dranomasina ity dia malaza be amin'ny mponina ao an-toerana ary mahaliana fa tsy dia misy olona any ivelany matetika. Izany dia morontsiraka tena izy, milamina, misy fasika madio sy rano milamina tokoa. Manakaiky ny morontsiraka ianao dia hahita sambo kely, fananan'ny mpanjono eo an-toerana. Na dia tsy morontsiraka tsara indrindra handro aza izy io, dia mety amin'ny mandeha an-tongotra, misotro toaka amoron-dranomasina ary mankafy ny fitsokan'ny rivotra.
Tendrombohitra La Calzada sy Las Piletas
Ireo morontsiraka roa, mifanila aminy, angamba no malaza any Sanlúcar. Ny hazakaza-tsoavaly malaza dia atao eto amin'ny Aogositra, iray amin'ireo lovantsofina lehibe indrindra eto an-tanàna.
Matetika dia avo ny haavon'ny asa ataon'ireto morontsiraka ireto, saingy mendrika ny fandehanana any amin'izy ireo, indrindra raha te hanararaotra karazana fampitaovana sy kojakoja rehetra ianao, mandritra ny fotoana mahafinaritra anao.
Raha mikasa ny hiala amin'ny korontana ao an-tanàna ianao ary mandany ny andro amin'ny tontolo tsy misy simba kokoa, dia hisarika anao i Playa de la Jara. Any amin'ny 15 minitra eo ho eo avy eo afovoan'i Sanlúcar de Barrameda, ity morontsiraka ity dia mety indrindra hankafizana milomano tsara, mampifandray ary mifandray amin'ny natiora.
Na dia tsy manana serivisy sy fotodrafitrasa marobe aza izy io, dia ny hatsaran'ny tontolo no mandoa izany. Tsy dia vitsy ny olona, ​​ka azo antoka ny filaminana. ary ny fijerena ny filentehan'ny masoandro mipetraka eo ambonin'ny fasika no tena mahaliana. Mazava ho azy, raha mankany amin'ity moron-dranomasina ity ianao dia manoro hevitra anao ny hanao booty, misy vato ary ity karazan-kiraro ity dia hanampy ny efitrano fidianao tsy hanimba.
Ny Plaza del Cabildo no fon'ny Sanlúcar de Barrameda, Bara, terraces ary trano fisakafoanana no zaraina manodidina azy ary ampahany lehibe amin'ny atmosfera no mifantoka. Ny loharano afovoany sy ireo hazo palmie lehibe maniry ao anaty kianja, dia mahatonga azy io ho toerana tsy manam-paharoa ary, tsy isalasalana, iray amin'ireo tandindona indrindra amin'ny faritra.
Feno fiainana izany ary Raha te hahafantatra ny kolontsain'ny tapas ianao dia ity toerana ity no tokony hanao azy. Ireo manana nify mamy ihany koa dia hahita ny drafitra lavorary eto, satria eo amin'ireo mponina manodidina ny kianja misy ny sasany amin'ireo trano fanaovana gilasy tsara indrindra any Sanlúcar de Barrameda.
Toy ny any amin'ny tanàna amoron-tsiraka hafa, Ny jono dia iray amin'ireo hetsika tranainy indrindra sy misy ifandraisany indrindra amin'ny Sanlúcar de Barrameda. Ny fahalalana ny varotra trondro dia fomba tena tsara handemana ny kolontsaina Sanlucan. Fa tsy misy tsara noho ny mankany amin'ny Tsenan'i Bonanza.
Any akaikin'ny seranan-tsambo, ny tsenan-trondro no ivon'ny asa fanjonoana ao an-tanàna. Mizara roa izy io, ny iray natokana amin'ny fivarotana trondro misy kitapom-batsy ary ny iray amin'ny fivarotana trawling. Ny lavanty trondro dia, tsy isalasalana, iray amin'ireo fampisehoana tena izy azonao zahana mandritra ny fitsidihanao an'i Sanlúcar. Manatrika izany ny mpivarotra trondro sy ny orinasa eo an-toerana izay mitady ny vokatra vaovao tsara indrindra. Raha te hahita ny votoatin'ny tanàna ianao dia afaka mahita izany koa manatona ny dock hijerena ireo trondro mamoaka entana.
Tsidiho ny valan-javaboary Doñana avy any Sanlúcar
Valan-javaboary Doñana Izy io dia iray amin'ireo faritra arovana manan-danja indrindra any Espana. Ny tahiry dia voaforona karazan-javaboahary maro karazana izay manome azy fahasamihafana sy tontolo manankarena izay miavaka any Eropa. Sanlúcar de Barrameda dia tsara vintana fa eo akaikin'ny valan-javaboary sy Ny fitsidihana an'i Doñana dia voalamina avy ao an-tanàna. Raha mitady zavatra mihoatra ny tsangambato ianao ary te hankafy ny natiora tsy voaroaka indrindra, dia hevitra lehibe ny famandrihana ny iray amin'ireo fitsangatsanganana ireo.
Ny zaridaina dia tafiditra amin'ny sambo, amin'ny alàlan'ny Guadalquivir Ary, na dia efa mahavariana aza ny fandehanana eny amoron'ny renirano, raha te hahalala ny tontolo iainana rehetra an'i Doñana ianao, dia afaka manakarama serivisy manerantany, izay misy torolàlana manokana ahafahanao mitsidika ny vazan-tany rehetra harena voajanahary.
Miala avy eo amin'ny morontsirak'i Bajo de Guía ireo sambo ary miampita ny Guadalquivir mankany amin'ny moron'ny fitehirizan-tany. Rehefa tonga eo, smanohy amin'ny fiara amin'ny faritra rehetra ianao ary manomboka dia mamakivaky ny velaran-tany mahavariana an'i Doñana: morontsiraka, dongom-pasika fotsy, mitahiry, honahona ... Mifarana amin'ny «La Plancha» ny zotra, tanàna taloha nonenan'ireo mponina nipetraka tao amin'ilay valan-javaboary.
Hamerina anao any Sanlúcar ny sambo, amin'izay ianao afaka manohy miala voly ao an-tanàna. Fantatrao izao, raha tsy fantatrao izay ho hitanao ao Sanlúcar de Barrameda, dia tadidio fa ny safidy iray dia ny fizahana ny manodidina azy sy Azonao atao ity manao fitsangatsanganana ity ao anatin'ny iray andro monja.
Flamenco any Sanlúcar
Flamenco dia iray amin'ireo singa ara-kolontsaina tena solontenan'ny Andalusia. Na izany aza, misy tanàna izay miaina ny fitiavana an'io karazana mozika io isaky ny zoro, Sanlúcar de Barrameda dia iray amin'ireo tanàna ireo.
Mankafy mihira sy mandihy, Misy toerana any Sanlúcar manam-pahaizana manokana amin'ny fampitana sy fampiratiana ny kanto amin'ireo tany ireo. Raha te hanakaiky kokoa ny kolontsaina Sanlúcar ianao dia tsy afaka mivoaka raha tsy mitsidika ny iray amin'ireo peza ary mbola fiainana manome izany karazana seho izany (ary momba izany no hanomezako vaovao misimisy etsy ambany).
Aiza no ahitako seho flamenco ao Sanlúcar de Barrameda?
Mbola fiainana averina amin'ny laoniny
Any Calle San Miguel no misy, mandritra ny telo minitra miala ny Palais d'Orléans, ity fifangaroan'ny trano fisotroana nentim-paharazana sy tablao manome ny mpizaha tany ny fahafinaretana amin'ny fampisehoana flamenco tokana, tanterahin'i mpanakanto matihanina, mandritra ny fanandramana lovia mahazatra an'ny faritra.
300 metatra miala an'i Castillo De Santiago, eo amin'ny Calle de la Zorra, no misy an'i Peña Flamenca Puerto Lucero. Ity fikambanan'ny kolontsaina tsy mitady tombom-barotra ity mikarakara fampisehoana flamenco. Manangona mpanakanto avy any amin'ny faritra ary manampy talenta tanora, miezaka ny peña hampiseho fa lova velona ao Sanlúcar ny flamenco ary manandrana mampita ny fitiavana an'ity kanto ity amin'ny olona rehetra tonga eo amin'ny tablao izy ireo.
Efitra Rociera El Rengue
Tapas, zava-pisotro ary mozika mivantana, ny Sala Rociera El Rengue no toerana mety indrindra ho an'ireo izay te hiala voly ao Sanlúcar avy any Barrameda ka hatrany amin'ny gadona rumbas sy sevillanas. Any Calle de las Cruces no misy, toerana manolotra rivo-piainana milamina izay ahafahanao manakaiky kokoa an'i flamenco amin'ny fomba marina sy hafa.
Toeram-pisotro misy divay any Sanlúcar
Ny famokarana divay, eo amin'ny tantara, dia hetsika ara-toekarena manan-danja ho an'i Sanlúcar de Barrameda. Na dia eo aza ny famiazam-boaloboka mivarotra divay avy amin'ny antokom-pinoana samihafa (Jerez, Vinagre ary Brandy de Jerez), Manzanilla no iray izay nifandray tamin'ny fomba nentim-paharazana tamin'ny kolotsaina Sanlúcar.
Es iray amin'ireo divay tena manokana eran'izao tontolo izao, Izy io dia manana toetra mampiavaka azy ary ny tany nahaterahany no manome izany nuansa manokana izany. Izany dia mety miaraka amin'ny aperitifa, Hihinana mangatsiaka (eo anelanelan'ny 5º sy 7º C) ary ampifanarahana tsara amin'ny sakafo rehetra avy any an-dranomasina ary, soa ihany, Sanlúcar dia manolotra akora tsara, vokatra vaovao sy avo lenta.
Azoko antoka fa efa naharesy lahatra anao aho hanandrana Chamomile iray vera, saingy… Tsy tianao ho fantatra hoe ahoana no ahazoana azy? Ny fizahan-tany divay dia safidy lehibe ho an'ireo mpitia divay izay tonga handany andro vitsivitsy ao an-tanàna. Misy toeram-boaloboka mandrindra fitsidihan'ny mpizahatany ary hanazavany ny fizotry ny famokarana manontolo ny zava-pisotro izay lasa mariky ny Sanlúcar.
Toeram-pisotro misy alikaola sasany izay mandamina fitsidihana ny toerana misy azy ireo
Niorina tamin'ny 1972, Bodegas Hidalgo La Gitana dia orinasa nentim-paharazana izay nampitaina tamin'ny ray hatramin'ny zanany lahy. Izy ireo dia manana ny lazany noho ny vokatra kintana: "La Gitana" Manzanilla, iray amin'ireo malaza indrindra ao Sanlúcar de Barrameda.
Mandamina fanandramana isan'andro ary karazana fitsangatsanganana samihafa. Ny famandrihana dia azo atao amin'ny tranokalan'izy ireo ary ny vidiny dia mitombina.
Ny firesahana momba an'i Manzanilla «La Cigarrera» dia mitovy dika amin'ny lovantsofina. Ny niandohan'ny famiazam-boaloboka dia natolotry ny mpivarotra Catalan iray izay niafara tamin'ny fijanonany tao Sanlúcar, Andriamatoa Joseph Colóm Darbó, ary izay tamin'ny 1758 dia nanangana fitoeram-boaloboka tao amin'ny toerana iray tao Callejón del Truco.
Androany, 200 taona mahery taty aoriana, ny orinasa dia nitombo ka nahatonga ny «La Cigarrera» ho iray amin'ireo Manzanillas be mpividy indrindra. Mba hampanakaiky ny besinimaro ny kolontsaina La Manzanilla sy hampitana ny fitiavana ny fomban-drazana sy ny tantaran'i Sanlucan, dia nanapa-kevitra ny tompona divay fa hanokatra izany ho an'ny besinimaro izy ireo Fitsidihana ireo fotodrafitrasa ary ampidirina ao a manandrana ny divay azon'izy ireo tsara indrindra. Ny famandrihan-toerana dia azo atao amin'ny fifandraisana atolotray ao amin'ny tranonkalany.
Nisokatra tamin'ny 1821, Bodegas Barbadillo dia tsy vitan'ny hoe manolotra fitsidihana mitarika ireo fotodrafitrasa sy tsiro fotsiny, fa koa Manana tranombakoka natokana ho an'ny tantara sy ny famokarana an'i Manzanilla any Sanlúcar izy ireo. Eo anelanelan'ny barika, hampita aminao ny fitiavana izay faritan'izy ireo ho "fomba fiainana" izy ireo ary hampanakaiky anao ny kolontsain'ny faritra amin'ny fomba miavaka.
La Manzanilla Solear no divay malaza amin'ny divay ary nanjary nalaza noho ny fitafiana sy fanafana ny ampahany lehibe amin'ny foara nentin-drazana Andalosiana.
Aiza no hisakafoanana any Sanlúcar de Barrameda
Gastronomy dia iray amin'ireo manintona mpizahatany lehibe ao amin'io faritra io. Sanlúcar dia nanjary malaza tamin'ny fanomezana hazan-dranomasina tsara indrindra, ny ny prawn ny vokatra kintana. Ny tsiro amin'ny trondro, ny fahafinaretana mankafy nendasina sy hazan-dranomasina vita tsara, ampiarahina amin'ny divay, dia mahatonga an'i Sanlúcar gastronomy ho solontenan'ny fomban-tsakafo ao Cádiz.
Mba tsy hialanao raha tsy mankafy ny nahandro tsara an'ny Sanlúcar de Barrameda, asehoko etsy ambany ny sasany trano fisotroana sy trano fisakafoanana naoty tsara indrindra eto an-tanàna.
Trano fisakafoanana Casa Bigote
Any Bajo de Guía, Nisokatra nanomboka tamin'ny 1951 ity trano fisakafoanana ity ary iray amin'ireo toerana izay mariky ny fomban-drazana sy ny hatsarana. Ny tolotra gastronomika dia mifototra amin'ny vokatra eo an-toerana, hazan-dranomasina ary trondro vaovao misy kalitao avo indrindra, masaka tsara ary tontolo miavaka.
Ny natomboka tamin'ny fivarotana enta-mavesatra, dia iray amin'ireo bara fanondroana ao Sanlúcar de Barrameda ankehitriny. Ny omelety makamba mahafinaritra izay namboarina tao an-dakozia dia nandresy ny vavonin'ireo mponina sy vahiny. Ny fanajana ny vokatra sy ny sakafo mahazatra any an-toerana no andry miaro ny tolotra gastronomika tena tsara sy ny fahombiazany.
Raha iray amin'ireo izay tia ny tena izy ianao dia hahaliana anao ity toerana ity. Manalavitra ny korontana ao afovoany, ity trano fivarotana ity no mahazatra ny olona any an-toerana. Raha ny hevitro, Rincón Bético dia manolotra trondro nendasina tsara indrindra any an-tanàna, vaovao, mangatsiaka ary amin'ny vidiny mirary. Ny cuttlefish nendasina iray manontolo dia lovia kintana, sarotra hita any amin'ny orinasa hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no jerena ao Sanlúcar de Barrameda
Tempolin'i Luxor any Egypt